Soo dejisan PaintTool SAI 1.2.5 – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaTifatiraha sawiradaPaintTool SAI
Qeybta: Tifatiraha sawirada
Bogga rasmiga ah: PaintTool SAI
Wikipedia: PaintTool SAI
PaintTool SAI – waa barnaamij loogu talagalay rinjiyeynta dijitaalka ah iyo sawirka dalbashada farshaxanka ee heerarka mihnadeed ee kala duwan iyo jihada shaqada. PaintTool SAI waxay awood u leedahay inay hirgeliso fikradaha ugu weyn ee dadka isticmaala sababo badan oo ah qalabka sawirada iyo qalabka sawirada si ay ugu habeeyaan si waafaqsan baahiyahaaga. PaintTool SAI waxay bixisaa noocyo kala duwan oo buraash ah, qalabyada lagu isticmaalo ama loo abuuro saameyn iyo palette buuxa oo suurageliya in ay isku dhejiso midab kala duwan oo dhab ah. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad la shaqeysid qaabab kala duwan, mid walbana waxaa ku jira qalab gaar ah oo loogu talagalay loona sawiro. PaintTool SAI waxay kaloo la shaqaysaa noocyada casriga ee kumbiyuutarrada garaafka waxayna ka jawaabaan xoogga cadaadiska iyo jilibka qalinka.
Noocyada kala duwan ee rinjiyeynta
La shaqee lakabyada
Qalabyada fudud ee qalabka sawirada
Ku haboon noocyo badan oo ah qaababka garaafyada
Taageeridda kiniinada garaafka adigoo koontaroolaya awoodda cadaadiska leh
Soo dejisan PaintTool SAI
Faallo ku saabsan PaintTool SAI
PaintTool SAI Xirfadaha la xiriira
Kumbuyuutarku wuxuu ilaaliyaa sawirada sawirada ee ka soo horjeeda kumbiyuutarada aan lagu fasaxin adoo ku dari doona suul.
Editor xoogbadane ay la socdaan qalab inay la shaqeeyaan images. Software ka kooban yahay qaabka uu u qaado soo koobin lagama maarmaanka u ah natiijada si mug leh.
Kala Beddelista aragtida – sawir iyo muuqaal sawir leh oo taageera qaababka casriga ah, oo leh aasaaska aasaasiga ah ee qalabka wax lagu qoro.
Agabka in la abuuro collages sawirka. software ka kooban yahay go’an aasaasiga ah ee qalabka tafatirka, wax badan oo habyaalada la heli karo iyo saamaynta dheeraad ah.
Barnaamijka waxaa loogu talagalay inuu abuuro seejiyeyaasha ku saabsan heer xirfadeed iyadoo la isticmaalayo muusik, 3D-animation iyo saameyn kala duwan.
ciyaaryahan warbaahinta la set oo ah hawlaha aasaasiga ah. software wuxuu taageeraa subtitles, oo search of content on YouTube oo loo maqli karo ee SHOUTcast durdurro leh.